Ozizi nke kọntinent ịkpafu: njirimara, mmalite na nchoputa | Netwọk Mgbasa Ozi
N'oge gara aga, e chere na kọntinent ka edobere ruo ọtụtụ nde afọ. Ọ dịghị ihe a maara na efere efere nke ụwa na-eme ka e nwee ekele site na ebugharị uwe ahụ. Otú ọ dị, ọkà mmụta sayensị bụ́ Alfred Wegener tụrụ aro tiori nke kọntinent agagharị. Ozizi a kwuru na kọntinent agagharịla kemgbe ọtụtụ nde afọ na ha ka na-eme.
Site na ihe a pụrụ ịtụ anya ya, nkwupụta a bụ nnukwu mgbanwe maka ụwa nke sayensị na geology. Chọrọ ịmụ ihe niile gbasara ịkpafu kọntinent ma chọpụta ihe nzuzo ya?
1 Theory nke kọntinent
2 Akaebe na akaebe
2.1 Nnwale Paleomagnetic
2.2 Nyocha ule
2.3 Nyocha ule
2.4 Nnwale Paleoclimatic
3 Ozo nke ikuku na mpaghara
4 Nkesa nke ihe di ndu ugbua
Theory nke kọntinent
Ozizi a na-ezo aka ka ngagharị ugbu a nke mbadamba ndị ahụ nke na-akwado kọntinent na nke na-agafe ọtụtụ nde afọ. N’akụkọ banyere ala nile nke ụwa, kọntinent ndị ahụ anọghị otu mgbe. E nwere usoro ihe akaebe anyị ga - ahụ ma emesịa nke nyeere Wegener aka ịgbagha echiche ya.
Movementgha ahụ bụ n'ihi mbido nke ihe ọhụrụ site na uwe ahụ. A na-emepụta ihe a n'ime oke osimiri. N'ụzọ dị otú a, ihe ọhụrụ ahụ na-akpa ike dị adị ma na-eme ka kọntinent ahụ gbanwee.
Ọ bụrụ na ị lelee anya na ọdịdị nke kọntinent niile, ọ dị ka a ga - asị na America na Africa jikọrọ ọnụ. Nke a bụ uche onye ọkà ihe ọmụma Francis Bacon n'afọ 1620. Agbanyeghị, ọ kwadoghị atụmatụ ọ bụla na kọntinent ndị a jikọtara ọnụ n'oge gara aga.
Onye kwuru nke a bụ Antonio Snider, onye America bi na Paris. N’afọ 1858, o welitere ohere na mpaghara ụwa niile ịgagharị.
Ọ bụrịrị na 1915 ka onye German meteoro ihu igwe Alfred Wegener bipụtara akwụkwọ ya akpọrọ "Mmalite nke kọntinent na oké osimiri". N'ime ya, ọ kpughere usoro echiche dum nke ịkpafu kọntinent. Ya mere, a na-ahụta Wegener dịka onye dere edemede ahụ.
N’akwụkwọ ahụ ọ kọwara etu ụwa anyị a nọrọ nwee ụdị nnabata buru ibu. Nke ahụ bụ, mpaghara ụwa niile anyị nwere taa jikọtara ọnụ. Ọ kpọrọ nnukwu kọntinent ahụ Pangea. N'ihi ikike dị n'ime ụwa, Pangea ga-agbaji ma gbapụ otu otu. Mgbe ọtụtụ nde afọ gafere, kọntinent ga-anọ n'ọnọdụ nke ha taa.
Akaebe na akaebe
Dabere na tiori a, n’ọdịnihu, ọtụtụ nde afọ site ugbu a, kọntinent ga-ezukọ ọzọ. Ihe mere ọ dị mkpa iji gosipụta nkwupụta a na akaebe na akaebe.
Ihe akaebe mbu mere ka ha kwenye ya bu nkowa nke paleo magnetism. Neticwa ndọta ọ bụghị mgbe niile na otu nghazi. Kwa mgbe, ọwara magnet agbanweela. Ihe dị ugbu a osisi magnet na ndịda na-abụbu ugwu, na ntụgharị ihu. A maara nke a n'ihi na ọtụtụ nkume ndị nwere nnukwu ọla na-enweta nghazi iji nweta ọdụ magnetik dị ugbu a. Achọtala nkume magnetik nke osisi ya dị n'ebe ugwu na-atụ aka na mkpanaka ndịda. Yabụ, n'oge ochie, ọ ga-abụrịrị ụzọ ọzọ.
Enweghị ike ịtụle paleomagnetism a ruo afọ 1950. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ịlele, ewere nsonaazụ na-esighi ike. N'agbanyeghị nke ahụ, nyocha nke usoro ndị a jisiri ike chọpụta ebe kọntinent dị. Nwere ike ịgwa nke a site na ilele ụzọ na afọ nke nkume. N'ụzọ dị otú a, enwere ike igosi na kọntinent niile dị n'otu.
Nnwale ndị ọzọ gbagwojuru ihe karịrị otu anya bụ ihe ndị dị ndụ. A na-ahụ ụdị anụmanụ na ahịhịa na mpaghara dị iche iche. Ọ bụ ihe a na-apụghị iche n'echiche na ụdị ndị na-adịghị akwaga mba ọzọ pụrụ isi n'otu kọntinent gaa n'ọzọ. Nke na-egosi na n'otu oge ha nọ n'otu kọntinent. Umu anumanu na-achụsasị ka oge na-aga, ka kọntinent ahụ na-agagharị.
Ọzọkwa, na ọdịda anyanwụ Africa na ọwụwa anyanwụ South America a na-ahụ usoro okwute nke otu ụdị na afọ.
Otu ihe nchoputa nke mere ule a bu nchoputa ihe ochie nke otu fern na South America, South Africa, Antarctica, India na Australia. Kedu ka otu ụdị fern si nwee ike isi n'ọtụtụ ebe dị iche iche? E kpebiri na ha bikọtara ọnụ na Pangea. Ystda adi sɛ Lystrosaurus a wɔtete nkuraase a atew ne ho wɔ South Africa, India ne Antarctica, ne Mesosaurus franse wɔ Brazil ne South Africa no.
Osisi abụọ na anụmanụ ndị ahụ bụcha otu ebe na-adịkarị iche. Mgbe ebe dị anya n'etiti kọntinent dị oke ukwuu, ụdị ọ bụla gbanwere ọnọdụ ndị ọhụrụ.
Ọ na-ama e kwuru na n'ọnụ nke kọntinent kọntinent nke Africa na America dabara n'ụzọ zuru oke. Ha bụbu otu. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị na ha nwere ụdị mgbaghoju anya, mana ịga n'ihu nke ugwu ugwu nke kọntinent South America na Africa. Taa, Oké Osimiri Atlantic na-elekọta ikewa ugwu ndị a.
Ihu igwe nyere aka nye nkọwa nke echiche a. A hụrụ ihe otu ụdị ikuku na-ekpo ọkụ na kọntinent dị iche iche. Ka ọ dị ugbu a, kọntinent ọ bụla nwere ọchịchị nke mmiri ozuzo, ifufe, okpomọkụ, wdg. Otú ọ dị, mgbe kọntinent niile mepụtara otu, e nwere ọnọdụ ihu igwe dị n'otu.
Ọzọkwa, a hụrụ otu ụdị moraine a na South Africa, South America, India na Australia.
Ozo nke ikuku na mpaghara
A na-agagharị agagharị na mbara ụwa n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa. Dị ka ọnọdụ kọntinent ụwa si dị, e nweela otu ụzọ ndụ ma ọ bụ ọzọ. Nke a pụtara na ịkwọ ụgbọ mmiri nwere akara akara akara nke na-egosi mmalite nke kpụkọtara kọntinent yana, nke ya, nke ụzọ ndụ ọhụrụ. Anyị na-echeta na ndị dị ndụ kwesịrị imeghari na gburugburu ebe obibi na, dabere na ọnọdụ ihu igwe ha, a na-egosipụta mgbanwe site na njirimara dị iche iche.
Anyị ga-enyocha nke bụ isi ihe nke isi mmiri kọntinent:
Ihe dị ka ijeri 1100 afọ gara aga: nguzobe nke mbu buru ibu nke uwa kariri na mbara uwa akporo Rodinia. N'adịghị ka nkwenkwe ọtụtụ mmadụ, Pangea abụghị nke mbụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga - ekwe omume na kọntinent ndị ọzọ dịbu adị, n'agbanyeghị na enweghị ihe akaebe zuru oke.
Ihe dị ka ijeri 600 afọ gara aga: Rodinia were ihe dị ka nde afọ 150 na nkebi nke abụọ a na-akpọ Pannotia. O nwere oge dị mkpirikpi, nke dị naanị afọ 60.
Ihe dị ka 540 nde afọ gara aga, Pannotia kewara n'ime Gondwana na Proto-Laurasia.
Ihe dị ka ijeri 500 afọ gara aga: E kewara Proto-Laurasia na mpaghara ọhụrụ atọ akpọrọ Laurentia, Siberia na Baltic. N’ụzọ dị otu a, nkewa a mere ka oke osimiri abụọ akpọrọ Iapetus na Khanty.
Ihe dị ka ijeri 485 afọ gara aga: Avalonia kewara site na Gondwana (ala nke kwekọrọ na United States, Nova Scotia, na England. Baltic, Laurentia, na Avalonia kụrụ onwe ha iji guzobe Euramérica.
Ihe dị ka ijeri 300 afọ gara aga: e nwere naanị nnukwu kọntinent 2. N'otu aka, anyị nwere Pangaea. ọ dịrị ihe dịka afọ 225 gara aga. Pangaea bu odidi nke otu uwa di ala ebe ihe nile di ndu gbasa. Ọ bụrụ na anyị eleba anya na nhazi oge nke ala, anyị ga-ahụ na ikike a dị adị n'oge oge Permian. N'aka nke ọzọ, anyị nwere Siberia. Oke osimiri Panthalassa gbara gburugburu kọntinent abụọ ahụ, naanị oke osimiri dị ugbu a.
Laurasia na Gondwana: Site na mmebi nke Pangea, Laurasia na Gondwana guzobere. Antarctica bidokwara ịmalite n'oge Triassic. O mere 200 nde afọ gara aga na ọdịiche nke ụdị ihe ndị dị ndụ bidoro ime.
Nkesa nke ihe di ndu ugbua
Ọ bụ ezie na mgbe kọntinent ndị ahụ kewara abụọ, ụdị ọ bụla nwetara alaka ọhụrụ na mbido, enwere ụdị nwere otu njirimara na mpaghara dị iche iche. Nyocha ndị a nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ụdị sitere na mpaghara ndị ọzọ. Ihe dị iche n'etiti ha bụ na ha gbanwere oge site na ịchọta onwe ha na ntọala ọhụrụ. Ihe atụ nke a bụ ubi ejula nke a hụrụ na North America na Eurasia.
Site na ihe akaebe a niile, Wegener gbalịrị ịgbachitere echiche ya. Arụmụka ndị a niile mere ka ndị ọkà mmụta sayensị kwenye. Ọ chọpụtala n'ezie nnukwu nchọta nke ga-ekwe ka ihe omimi pụta na sayensị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ozizi banyere ịkpafu kọntinent
Ọ masịrị m, echere m na tiori ahụ dị ezigbo mma ma ekwenyere m na America na Africa gaara adị n'otu n'ihi na ọ dị ka mgbaghoju anya. 🙂